AutoSEO बनाम पूर्ण SEE - कुन Semalt SEO सेवा तपाईंको लागि उत्तम छ
त्यसोभए, तपाईले अन्त्यमा Semalt को उद्योग अग्रणी SEO सेवाहरूको अन्वेषण र प्रयोग गर्ने बुद्धिमानी निर्णय लिनुभयो?
तपाईको निर्णयलाई धन्यबाद, तपाई चाँडै नै खुशी र सन्तुष्ट क्लाइन्टलको बढ्दो पोखरीमा सामेल हुनुहुनेछ जसले हाम्रो डिजिटल मार्केटिंग सेवाबाट फाइदा उठाए। तर त्यो निर्णय संग सही सेवा छनौटको ठूलो जिम्मेवारी आउँछ। एक जुन तपाईंको लागि आदर्श हो र तपाईंको विशिष्ट आवश्यकताहरू र व्यापारिक लक्षहरू अनुरूप।
यदि तपाइँ तपाइँको वेबसाइटको एसईओ प्रदर्शन सुधार गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने, Semalt ले दुई प्रमुख प्याकेजहरू प्रस्ताव गर्दछ: AutoSEO र FullSEO।
जबकि तपाईसँग पहिले नै यी दुई प्याकेजहरुमा के समावेश छन् को बारे मा एक राम्रो समझ हुन सक्छ, अझै शंका र प्रश्नहरूको लागि ठाउँ हुन सक्छ। यदि तपाईं एसईओ को क्षेत्र मा एक शुरुआती हुनुहुन्छ भने, विस्तृत विवरण अझ आवश्यक छ।
त्यसो भए, आज हामी हाम्रो दुई सबैभन्दा बेच्ने एसईओ प्याकेजहरू तुलना गर्न केहि समय लिन्छौं। यस द्रुत तुलना रिपोर्टमा जानु भएपछि, तपाईं प्याकेज छनौट गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंको व्यवसायको लागि उपयुक्त छ।
AutoSEO र FullSEO - Semalt को SEO सेवाहरु
पहिले प्याकेजहरूको सामग्रीहरूको माध्यमबाट सुरू गरौं। जबकि ती दुबै व्यवसायहरूमा लक्षित छन्, त्यहाँ प्रत्येक प्याकेजको दायरामा भिन्नताहरू छन्। यो सेक्सनले तपाईंलाई यी भिन्नताहरूको बारेमा बढि विवरणहरू दिनेछ।
AutoSEO के हो?
Semalt द्वारा AutoSEO एक 'पूर्ण घर' प्याकेज हो जुन तपाइँको अनलाइन व्यापारको लागि सबै भन्दा आधारभूत र मध्यवर्ती खोज इन्जिन अनुकूलन (SEO) गतिविधिहरूलाई समेट्छ। यो तपाइँको वेबसाइट को लागी एक एसईओ अभियान चलाउँछ र तपाइँको जैविक स्तर निर्धारण को लागी धेरै अन-पेज र अफ-पृष्ठ गतिविधिहरु कार्यान्वयन गर्दछ।
के तपाईसँग वेबसाइट छ जुन गुगलको जैविक खोजीमा नदेखीएको छ? AutoSEO ले तपाईंलाई मार्ग देखाउन सक्छ यसले केहि अत्यन्त आवश्यक अप्टिमाइजेसन गतिविधिहरू गर्दछ। ती मध्ये केही तल सूचीबद्ध छन्:
कीवर्ड रिसर्च - तपाईको व्यवसाय, तपाईको उद्योग, र तपाईको वेबसाइट को महत्वपूर्ण आलोचनात्मक किवर्डहरु को लागी एक सूची उत्पन्न गर्न को लागी परीक्षा। तपाईका सम्भावित ग्राहकहरु गुगल वा बिंग जस्तै खोज ईन्जिनमा खोज्दछन्। यो एसईओ को एक सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण तत्व हो
अन-पेज अप्टिमाइजेसन - तपाईंको वेबसाइटको प्रत्येक पृष्ठको सामग्री भित्र सही कुञ्जी शव्दहरूको साथसाथै अन्य अन-पृष्ठ तत्त्वहरूको अनुकूलन, जस्तै शीर्षक, मेटा वर्णन, र छवि Alt गुणहरू।
लिंक निर्माण - अफ-पृष्ठ अप्टिमाइजेसनको रूपमा पनि चिनिन्छ, यसले अन्य वेबसाइटहरूमा सान्दर्भिक सामग्रीको उत्पादन र प्रसार गर्दछ र तपाईंको डोमेनमा लिंक फिर्ता लिन्छ। तपाईंको साइटको एसईओ जुसलाई तपाईंको डोमेनमा निर्देशित गर्दै यसले तपाईंको वेबसाइटको एसईओ मूल्य (डोमेन प्राधिकरण, मुख्यतया) सुधार गर्दछ
वेब एनालिटिक्स - दैनिक, साप्ताहिक, मासिक र त्रैमासिक समीक्षा विभिन्न मेट्रिक्स जस्तै ट्राफिक, रूपान्तरणहरू, र तपाइँको आगन्तुकहरु बाट समग्र सment्लग्नता बुझ्न।
AutoSEO यी गतिविधिहरू स्वचालित तवरले स्वचालित र एक सक्रिय एसईओ अभियान प्रदान गर्दछ जुन वेबमा तपाईंको समग्र खडा बढावाको उद्देश्य हो।
चित्र १ - एनालिटिक्स डाटाको आकलन एसईओको महत्त्वपूर्ण अंश हो (AutoSEO ले यसलाई प्रदान गर्दछ)
एक सुविधा जुन पूर्ण SESE बाट AutoSEO फरक गर्दछ कि छिटो परिणाम दिन्छ। यदि तपाईं को एक आला व्यवसाय छ र कम प्रतिस्पर्धा अनलाइन को बारे मा विश्वास छ, AutoSEO केहि हप्ता को लागी तपाइँ परिणाम प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सामान्य अर्थमा, एसईओ ले प्राय: सकारात्मक प्रभावका लागि महिनौं लिन्छ। जे होस्, तपाईले याद गर्नुपर्दछ कि Semalt ले प्रारम्भिक विश्लेषण गर्दछ परिणामहरू कसरी चाँडो हुन सक्छ भन्ने बुझ्नको लागि। हाम्रो ग्राहक समर्थनको साथ विस्तृत विश्लेषण र त्यसपछिको छलफलले तपाईंलाई असभ्य समयरेखाको साथ आउन मद्दत गर्दछ।
यस सन्दर्भमा, AutoSEO निम्न प्रकारका प्रयोगकर्ताहरूका लागि उत्तम छ:
उद्यमीहरू उनीहरूका धेरै अनलाइन व्यावसायहरूको लागि SEO समर्थन खोजिरहेका छन्
यातायात / पाठकहरु लाई आकर्षित गर्न ब्लगरहरु र लेखकहरु
प्रभाव र ईन्टरनेट सेलिब्रेटीहरू
हेल्थकार्टका वैभव चौरसियाको उदाहरण लिनुहोस् जसले हाम्रो वेबसाइटको समग्र स्थितिलाई गुगल इंडियामा धक्का दिन हाम्रो अटोसेओ सेवाहरू प्रयोग गर्थे। दुई महिना भित्र, हामी उसको ब्यापारिक महत्वपूर्ण कुञ्जी शव्दहरूको रैंकिंग सुधार गर्न सक्षम भएका छौं। "म ती स्टार्टअपहरू र कम्पनीहरूलाई कडा सिफारिश गर्दछु, जो कम वेबसाइट र कम वेबसाइटको कमजोर दृश्यताबाट पीडित छन्," चौरासिया भन्छन जसले विश्वव्यापी सबै भर्खरै सुरू भएका, उद्यमहरू, र एमएसएमइलाई Semalt सिफारिस गर्छन्।
यदि तपाईं एसईओ (वा डिजिटल मार्केटिंग, सामान्यतया) को दुनिया मा नयाँ हुनुहुन्छ वा छिटो परिणाम खोज्दै हुनुहुन्छ भने AutoSEO एक उत्तम विकल्प हुनेछ। यदि तपाईं एक स्टार्टअप व्यवसाय हो जुन कोरोनाभाइरस प्रकोप अवस्थाको द्रुत तर पूर्ण फाइदा लिन चाहन्छ भने, हामी AutoSEO सिफारिस गर्दछौं।
जहाँसम्म, यदि तपाइँका लक्ष्यहरू दीर्घकालीन छन् र तपाइँ एसईओ मार्फत तपाइँको व्यावसायको अनलाइन प्रतिष्ठा निर्माण गर्न चाहानुहुन्छ, तपाइँले फुलसियो, हाम्रो A-to-Z SEO प्याकेजमा हेर्नु पर्छ।
FullSEO के हो?
आजका दिनहरूमा सबैले आफूलाई एसईओ विशेषज्ञ भन्छन्। यो सत्य हुन सक्छ यदि तपाईं केवल एक वेबसाइट अनुकूलन र जैविक परिणामहरू प्राप्त गर्ने तरिकाको रूपमा सामग्री लेख्न सोच्नुहुन्छ। वास्तविकतामा, र तपाइँ यो जान्नु हुनेछ, SEO त्यो भन्दा धेरै गहिरा र जटिल छ।
तपाइँको व्यवसायको लागि सफल एसईओ अभियान हुन तपाइँले वास्तविक रूपान्तरणहरू प्राप्त गर्दछ (जस्तै वास्तविक ग्राहकहरू), तपाइँले मूल कुरालाई पार गर्नुपर्दैन। र त्यो जहाँ Semalt द्वारा FullSEO चित्र मा आउँछ।
AutoSEO को उन्नत संस्करण, यो प्याकेजले तपाईंलाई एसईओ अभियानमा आवश्यक पर्ने सबै कुरा प्रदान गर्दछ। कुञ्जी शब्द अनुसन्धानबाट परामर्श सम्म, फुलसेओसँग सबै चीजहरू छन् जुन व्यवसायलाई यसको अनलाइन उपस्थिति बढाउन र यसको बिक्री बलियो बनाउन आवश्यक छ। हामी कुरा गरिरहेका छौं ट्राफिक, सीसा, र समग्र होल्ड र तपाइँको वेबसाइट को प्रतिष्ठा netizens बीच।
चित्र २ - ग्राहक समर्थन AutoSEO सँग तुलना गर्दा FullSEO का मुख्य आकर्षणहरू मध्ये एक हो
फुलसेओको साथ, तपाईं बढेको बिक्री, नाफा, र तेस्रो-पक्ष विक्रेताहरूसँग साझेदारी देख्दै हुनुहुन्छ। तपाइँ र तपाइँको व्यवसायलाई महिनौं र वर्षहरूमा संचयी लाभ तपाइँले फुलसेओ अभियान चलाउनाले तपाइँलाई लामो समयको लागि पुरस्कार दिनेछ। जस्तो तपाईंलाई थाहा छ, आज उच्च डोमेन प्राधिकरणको साथ एउटा ठोस वेबसाइट निर्माणले तपाईंलाई वर्षौं बर्षको लागि लाभहरू लिन सक्छ।
यहाँ महत्वपूर्ण गतिविधिहरूको सूची छ जुन तपाईं AutoSEO ले प्रदान गर्ने प्रत्येक चीजको अतिरिक्त पाउनुहुनेछ:
वेबसाइट टेक्निकल फिक्स - CMS अप्टिमाइजेसन, स्कीमा मार्कअप, पृष्ठ गति सुधार, साइटम्याप, र GA / GTM ट्यागिंग। तपाइँको वेबसाइट को एक पूरा ओवरहाल को साथ अत्याधुनिक समाधान प्रदान गरीन्छ जुन SEO र मार्केटिंग उद्योगमा व्याप्त छ
सामग्री - प्रत्येक एकल सामग्रीको आवश्यकता - एक वेबसाइट ब्लग बाट सोशल मीडिया पोस्ट को पीआर आउटरीच - को लागी आदर्श, कम्पोज र आफ्नो वेबसाइटको एसईओ मूल्य को सुधारको लागि प्रकाशित गरिनेछ।
परामर्श - यदि तपाईं एसईओ को लागी नयाँ हुनुहुन्छ, तब तपाईंलाई उत्तम अभ्यासहरूमा परामर्शको आवश्यक पर्दछ। Semalt को फुलसियो प्याकेजले तपाईंलाई सामग्री बुझाउने अवसरहरू, उन्नत तरिकाहरू र धनी स्निपेटहरू जस्ता प्रविधिहरू, र विभिन्न प्रकारका गतिविधिहरू जुन तपाइँको वेबसाइटलाई तपाइँको मनपर्दो खोज इञ्जिन पृष्ठमा सुदृढ पार्ने निश्चित छ भनेर प्रदान गर्दछ।
अनिवार्य रूपमा, फुलसेओको साथ तपाईले आफ्नो अनलाइन व्यवसायको लागि अनुकुल योजना पाउनुहुनेछ जुन ठूलो चित्रमा देखिन्छ। के तपाईं स्थानीय उद्योगमा नयाँ ई-कमर्स खेलाडी हुनुहुन्छ बिगविगहरू र स्थापित वेबसाइटहरूसँग पहिले नै भीड? पूर्ण एसईओ तपाईं सही मा अनलाइन रैंकिंग मा धक्का हुनेछ।
ई-वाणिज्य कम्पनी Zanvic को उदाहरण लिनुहोस् , जसले Semalt का फुलसियो सेवाहरूको फाइदा लिए र यसको जैविक यातायात सात महिना भन्दा कममा 500००% मा वृद्धि गर्न सक्षम भयो। अभियानको पहिलो छ महिनाको अन्त सम्म, Semalt गुगलको शीर्ष १० परिणाममा यसको १ keywords० भन्दा बढी लक्ष्य कुञ्जी शव्दहरू ल्याउन सक्षम भयो।
यो स्पष्ट छ कि फुलएसईओको पक्कै AutoSEO मा माथिल्लो किनारा छ र यसले समग्र दृष्टिकोण लिन्छ। तर त्यसोभए कसरी थाहा पाउनुहुन्छ भने फुलसियो तपाईंको लागि हो वा होईन?
यसको तुलनामा, फुलसिओलाई कर्पोरेटहरू, राम्रा फंड प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय स्टार्टअपहरू, र कम्पनीहरूले उनीहरूको उद्योगमा बाधा पुर्‍याउने आशा राखेका छन्।
तपाईंले कुन छनौट गर्नुपर्छ?
जस्तो कि तपाईं माथिका सेक्सनहरूबाट घटाउन सक्नुहुन्छ, यो स्पष्ट छ कि AutoSEO एक स्टार्ट एसईओ प्याकेज हो जुनसँग यसको दायरामा सीमित गतिविधिहरू छन्। तसर्थ, यो व्यक्ति र साना स्टार्टअपहरूको लागि उत्तम छ जो द्रुत नतीजाहरू चाहान्छन्।
अर्कोतर्फ, Semalt ले कॉर्पोरेट र ई-वाणिज्य वेबसाइटहरु लाई FullSEO सिफारिश गर्दछ जसले ठूलो प्रतियोगिताको अगाडि सफल हुन सक्षम हुन ठूलो सोच्न र ठूलो कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ।
AutoSEO र FullSEO को तुलना: द्रुत सारांश
हामीलाई थाहा छ कि तपाईंहरू मध्ये कोही खासमा यो लकडाउन अवधिको अवधिमा सेवा ठीक गर्न हतारमा हुन सक्नुहुन्छ। त्यसो भए, यहाँ टेबुलको रूपमा द्रुत सारांश छ। पूर्ण एसईओ प्याकेजहरू प्यारामिटरहरूमा कसरी भिन्न छन् जाँच गर्नुहोस्।
अब, तपाइँसँग तपाइँको छनौटको बारेमा निष्पक्ष विचार हुनुपर्दछ। जबकि दुबै AutoSEO र FullSEO का तिनीहरूका विशिष्ट फाइदाहरू छन्, तपाईंले आदर्श रूपमा एउटा छनौट गर्नुपर्छ जुन तपाईंको आवश्यकतालाई उत्तम सूट गर्दछ।
तपाईंको वेबसाइटको प्रारम्भिक विश्लेषणको लागि, आज हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् । तपाईं यहाँ क्लिक गरेर तपाईंको AutoSEO परीक्षण प्रस्ताव सुरू गर्न सक्नुहुनेछ।